Baarlamaanka Sweden oo Stefan Löfven u ansixiyay Raysal wasaare | Somaliska
Baarlamaanka Sweden (Riksdagen) ayaa maanta ansixiyay in gudoomiyaha xisbiga Socialdemokraterna (S) Stefan Löfven uu noqdo raysal wasaaraha cusub ee wadanka. Stefan Löfven ayaa helay 132 cod, iyadoo 49 ay diideen halka 154 xildhibaan ay ka aamuseen. 14 xildhibaan ayaan soo xaadirin.
Sida muuqata Stefan Löfven ayaa waxaa u codeeyay xildhibaanada xisbigiisa iyo xisbiga Miljöpartiet, halka ay dhamaan xildhibaanada SD ay diideen. Xildhinaanada xisbiyada xulufa Alliansen ayaa ka aamusay. Inkastoo uusan Stefan Löfven helin aqlabiyada baarlamaanka ayaa hadana uu noqonayaa raysal wasaare maadama aysan ka soo horjeesan inta badan xildhibaanada. Balse tirada cododka uu helay ayaa muujinaysa culeyska siyaasada ee sugaya.
Löfven ayaa ah nin aan waayo aragnimo siyaasadeed lahayn, isagoo xitaa aan baarlamaanka Sweden horay ugu jirin. Inta uusan noqon gudoomiyaha xisbiga Socialdemokraterna (S) ayuu ahaa gudoomiyaha xisbiga shaqaalaha ee loo yaqaan IF-Metall.
Löfven ayaa laga sugayaa hada in uu soo magacaabo wasiirada dowladiisa iyo in uu miisaaniyada sanadka soo socda uu soo hordhigo baarlamaanka, taasoo noqon doonta culeyska ugu badan ee horyaala. Haddii baarlamaanka uu diido miisaaniyadiisa ayay dhici doontaa dowlada cusub, iyadoo wadanka lagu celin doono doorasho cusub.